Muongorori Anoti iPhone 7 Ichadzokororazve Kutengesa Marekodhi | IPhone nhau
2016 rave riri gore rekutanga kutengeswa kwe iPhone kwaramba kubva kubvira yekutanga iPhone payakatangwa muna 2007. Nechikonzero ichi, avo vaive kusvika parizvino vatengesi vaviri vakuru muApple vakatengesa zvikamu zvavo zvese, izvo zvakaita kuti kukosha kwavo kuderere uye Wall Street yakavhunduka . Asi havazi vese vanofunga kuti Apple iri kudzikira uye svondo rapfuura zvikamu zvayo zvakatanga kumuka zvakare, muchidimbu nekuda kwe $ 1.000 bhiriyoni rekudyara naWarren Buffett. Iye zvino muongorori anoti iyo iPhone 7 ichaputsazve zvinyorwa zvekutengesa.
Muongorori ane tarisiro (akakosha rwiyo) ndeye BMO Capital Markets 'Tim Long, uye anoti anofunga kuti iyo iPhone 7 ichatengesa zvakanyanya nekuti chikamu chikuru chevashandisi ve iPhone vanotova nemodeli ine makore maviri kana anopfuura. Kubva pamashoko ake, zvinonzwisisika kuti Long anofunga kuti iyo iPhone 6s Iyo haina kutengesa zvakanyatsonaka nekuda kwekuti iyo iPhone 6 yakatengesa zvakadii, yekutanga smartphone pane yakavharika iyo yakaona saizi yayo ichikwira kubva pamasendimita mana.
Iyo iPhone 7 inogona kutyora zvinyorwa zvekutengesa
25% ye "mushandisi base" yakagadzirira kukwidziridza, Long anotenda, iri vateereri vemamirioni zana emafoni. Yakareba, kubva kuBMO, yakatarisa kumashure kune nhoroondo yekutengesa kwe iPhone uye yakaverengwa avhareji, 120% yevashandisi ichagadzirisa nekukurumidza panouya gore rinotevera modhi; 17% ichagadzirisa gore rinotevera; 58% gore rinotevera. Chete 22% yevashandisi ndivo vanotarisira chimwe chinhu.
Muongorori weBMO anoti avo vane iPhone ingangoita makore maviri vanobatana ne23% yebase rekushandisa rakatenga iyo iPhone 6 payakatangwa muna 2014, muna 2015 yaive pasi kusvika pa19% nekuvhurwa iyo iPhone 6s; uye gore rino iPhone 7 ichakwira 25%, izvo zvaizokonzeresa rekodhi 2% kupfuura izvo zvakatengeswa muna 2014. Tichifunga nezvezvakaonekwa mukota yekupedzisira yezvemari yeApple, zvinoita kwandiri kunge tarisiro yakasimba. Uye newe?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Muongorori weBMO anoti iPhone 7 ichaputsa zvakare zvinyorwa zvekutengesa